हिमाल खबरपत्रिका | ‘मलेशियामा कामदार पठाउन अझै सजिलो छैन’
‘मलेशियामा कामदार पठाउन अझै सजिलो छैन’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे भन्छन्, “व्यवसायीले सेवा शुल्क बापत कामदारको पहिलो महीनाको पारिश्रमिक लिन पाउनुपर्छ।”
नवनिर्वाचित अध्यक्षका नाताले तपाईंका प्राथमिकता के–के हुन् ?
सरकारले खाडी र मलेशियाका लागि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लागू गरेर कामदारबाट रु.१० हजार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न लिखित निवेदन दिनेछौं । सेवा शुल्क बापत हामीले कामदारको पहिलो महीनाको पारिश्रमिक लिन पाउनुपर्छ । कुल ५५४ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारलाई रु.४ अर्ब २७ करोड धरौटी बुझाएका छौं । उक्त रकमबाट आएको ब्याजबाट व्यवसायी कल्याणकारी कोष बनाउन पहल गर्नेछौं ।
मलेशियाको रोजगारी खुलाउन गरिएको नयाँ श्रम समझदारी सजिलै कार्यान्वयन होला त ?
नयाँ श्रम समझदारीपछि पनि मलेशियामा कामदार पठाउन सजिलो छैन । रोजगारदाताबाट माग आएको छैन । अहिले पुरानो मागका आधारमै कामदार गइरहेका छन् । समझदारी अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले कसरी कामदार पठाउने भन्ने स्पष्ट जानकारी सरकारले दिनसकेको छैन ।
कामदारको हितमा गरिएको समझदारीको तपाईंहरुबाट किन विरोध ?
हामी विरोधमा छैनौं । तर, व्यवसायीलाई सरकारले बाँध्नु भएन । श्रम समझदारीका अस्पष्ट विषय श्रम मन्त्रालयले प्रष्ट पार्नै पर्छ ।
आम जनतामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छवि राम्रो नहुनुको कारण के हो ?
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार अलपत्र परे म्यानपावर व्यवसायीलाई दोष दिइन्छ । तर, व्यक्तिगत रुपमा गएकाहरु धेरै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसको भार पनि हामीले बोक्नु परेको छ । व्यवसायीबाट गएका कामदार अलपत्र परे उजुरीका आधारमा सरकारले कारबाही गरिरहेको छ । धरौटी रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइन्छ । यी विषय प्रष्ट बनाउन नसक्दा व्यवसायीलाई हेर्ने नजर फरक परेको हो ।
व्यवसायीले कामदारबाट चर्को रकम असुल्न पासपोर्ट नियन्त्रण लगायतका गैरकानूनी हर्कत पनि त गरिरहेका छन् नि !
व्यवसायीका पनि कमजोरी होलान् । तर, हामी संस्था स्वच्छ बनाउन चाहन्छौं । पछिल्ला वर्ष संस्थागत ठगी न्यूनीकरण भएको छ । विगतमा गरेका गल्ती नदोहो¥याउने मेरो प्रतिबद्धता छ । सरकारले पनि व्यवसायीलाई पारदर्शी रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन सेवा शुल्क बढाउनुपर्छ ।